Jaaliyada Soomaalida Norway oo soo bandhigtay cadadka lacagtii loo uruurshay musiibadii Zoobe.
Written by caaqil dalmar on 11 November 2017 .
Kadib qaraxii wuxuushnimada ahaa ee 14-kii October ka dhacay isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho ayaa si aan kala har lahayn waxa ay Soomaalida ku nool dalka gudahiisa iyo dibadiisa ka sameeyeen gurmad qaran oo deeq loogu uruurinaayay dadkii waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi naxariisdarada ahaa.
Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa deeq uruurin ka bilowday 19-ka gobol ee uu ka kooban yahay dalkaani, taasoo ugu dambeyntii Masaajidka Towfiiq ee magaalada Oslo caawa lagu soo bandhigay.
Deeq uruurintaan oo ay garwadeen ka ahaayeen Hay’ada Xanaano iyo masjidka Towfiiq ayaa lagu sheegay magacyada magaalooyinka inta badan lacagahaani ay ka soo xaroodeen iyo guud ahaan isku geyntooda.
Haddaba waxa ay sheegeen Magaalada Oslo inay ka soo xarootay lacag dhan 264.105 NOK, Sidoo kale Magaalada labaad ayaa lagu sheegay inay tahay Magaalada Stavanger oo iyana ka soo xarootay 130.898 NOK, halka magaalada Bergen oo ah Caasimada labaad ee dalka Norway iyana laga helay 113.721 NOK, guud ahaan cadadka lacagihii ay soo uruuriyeen waxa ayna dhamayd 1,090,574 NOK una dhiganta doollar ahaan $128162,69 USD, isla markaana caawa la soo bandhigay.
Dr. Sheekh Cali oo ah Imaamka Masjidka Towfiiq ayaa ugu horeyn kaga mahadceliyey Soomaalida ku nool dalka Norway sida qiimaha lahayd oo ay kaga qeyb qaateen gurmadka walaalahooda ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday 14-kii October Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Guddoomiyaha Hay’ada Xanaano oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay inay haba yaraatee ka qaadi doonin wax lacag ah maadaama Xanaano ay bixisay agabyadii lagu uruuriyey lacagahaasi.
Xildhibaan Baashe Muuse oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Magaalada Oslo, ahna afhayeenka guud ee Soomaalida dalka Norway ayaa ku amaanay guud ahaan Soomaalida sida aan kala harka lahayn oo ay kaga qeyb qaateen caawinta walaalahood, taasina ay tahay arrin Soomaalida lagu yaqaan marka ay dhibaato dhacdo inay gacmaha is qabsadaan isla markaana si wadajir ah isugu gurmadaan dal iyo dibad intuba.
“Jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Norway waxaa farxad iyo reyn reyn intuba u ah inay muddo kooban kaga jawaabaan codsigii ahaa Gurmad Qaran si loo samata bixiyo dadkii wax ku noqday musiibadaasi inagu habsatay” ayuu yiri Xildhibaan Baashe Muuse.
Dhanka kale Axmed Abuukar Jalwo (Axmed Taajir) oo ku hadlay magaca Saxaafada gudiga deeq uruurinta ayaa sheegay ka dhalinyaro ahaan inay la gudboon tahay inay jeebka gacanta geliyaan, walaalahoodna caawiyaan maadaama dhalinyaradii ku nooleed gudaha dalka Soomaaliya ay dhiigooda u shubeen, waxa uuna cod dheer ku booriyey in qof waliba uu sawirto mashaqadii dhacday ayna ilaabin caruurtii ku agoontowday musiibadaas.
Ugu danbeyntii Farxiyo oo ka mid ah Guddiga deeq uruurinta dalka Norway ayaa dhankeeda sheegtay in maalinta Axada lacagahaasi ku wareejin doonaan guddiga Gurmad Qaran ee uu madaxda u yahay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horaysay Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway gurmad noocaan oo kale ay sameeyaan, waxaa la xusuustaa abaarihii ku dhuftay bariga iyo bartamaha Soomaaliya inay gacan weyn ka geysteen dadkii ku ceyr-toobay.
Wariye Salaad Xuseen Maxamuud (Salaad Daacad).